Wararka Xanta Suuqa Kala Iisbiga Ee Maanta: Mbappe, Grealish, Barkley, Raphinha, Musa, Shawcross
HomeWararka CiyaarahaWararka Xanta Suuqa kala iisbiga ee maanta: Mbappe, Grealish, Barkley, Raphinha, Musa, Shawcross
February 7, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalada Kale, Horyaalka France, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Weeraryahanka Paris St-Germain Kylian Mbappe ayaa laga yaabaa inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda heysata horyaalka Ligue 1 ka hor inta uusan u dhaqaaqin Real Madrid labo sano gudahood iyadoo ciyaaryahanka reer France uu sugayo xaalada dhaqaale ee kooxda reer Spain si ay u soo fiicnaato. (AS)
Real Madrid ayaan u dhaqaaqi doonin ilaa PSG ay diyaar u tahay inay iska iibiso Mbappe kooxda reer France ayaa laga yaabaa inay go’aansato inay diyaar u tahay inay 22 jirkaan fasaxdo xagaaga haddii uusan saxiixin qandaraas kordhin. (Marca)
Aston Villa ayaa diyaar u ah inay u soo bandhigto ciyaaryahanka khadka dhexe Jack Grealish, oo 25 jir ah, heshiis hormar leh sidoo kale waxay dooneysaa inay heshiis amaah ah kula soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer England Ross Barkley, oo 27 sanno jir ah, kana soo jeeda Chelsea . (90min)
Liverpool ayaa isha ku heysa garabka reer Brazil Raphinha ka dib saameynta 24 jirkaan uu ku yeeshay Leeds United xilli ciyaareedkan. (footballinsider247)
West Bromwich Albion ayaa la dhibtooneysa inay kordhiso miisaaniyaddeeda si ay ula soo saxiixato weeraryahanka reer Nigeria Ahmed Musa, kaasoo ah wakiil xor ah, Brighton, Burnley, Southampton iyo CSKA Moscow ayaa laga yaabaa inay u dhaqaaqaan 28 jirkaan. (dailymail)
West Ham ayaa doonaysa Blackburn Weeraryahankeeda reer England Adam Armstrong, oo 23 jir ah, iyagoo tixgelinaya dalab xagaaga ah. (Sun)
Daafaca reer England Ryan Shawcross, oo 33 jir ah, ayaa wadahadalo kula jira Stoke City oo ku aadan inuu kansalo qandaraaskiisa si uu ugu biiro kooxda ka ciyaarta Major League Soccer ee Inter Miami isagoo si xor ah ugu biiraya . (min)
Celtic ayaa qodob lagu daray heshiiska la soo jeediyay si ay ula soo saxiixato daafaca reer England Ben Davies oo ka yimid Preston North End kaasoo u ogolaaday Liverpool fursad ay ku soo xero geliso 25 jirka. (Mirror)
Barcelona ma aqbali doonto wax ka yar 15m euros (£ 13.2m) haddii ay iibineyso goolhayaha reer Brazil Neto Murara, 31, xagaaga. (Marca)
Daafaca reer France William Saliba, oo 19 jir ah, ayaa ku dhibtooday inuu saameyn ku yeesho Arsenal laakiin wuxuu ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka bisha ee Nice ka dib markii uu amaah ugu biiray kooxda Ligue 1 bilowgii Janaayo. (Metro)
Ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ee kooxda Chelsea Michael Ballack ayaa sheegay in Timo Werner “laga yaabo inuu ka shaqeeyo qaab ciyaareedkiisa” isagoo ka hadlay dhibaatooyinka 24 jirka weerarka ka ciyaara ee reer Germany ka hor kulanka Blues. (Metro)